Indlwana ❤enhle, ikamelo elilodwa + i-loft, Ilala izinsana ezingu-6 INC❤ - I-Airbnb
Indlwana ❤enhle, ikamelo elilodwa + i-loft, Ilala izinsana ezingu-6 INC❤
Strawberry, Arizona, i-United States
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Marilyn
U-Marilyn Ungumbungazi ovelele
> > Izivakashi ezingaphezu kuka-2 = $ 10/umuntu/ubusuku kubantu abangaba ngu-6 kuhlanganise nezinsana! > > Sicela ufake izinsana ezingaphansi kuka-2 enganeni 2~12 isibalo
> > Imithetho Yendlu itholakala ngaphansi kwebalazwe. Sicela uskrole uye phansi ukuze
uzifunde > > Izinja kufanele zimenyezelwe. Sivumela izinja, futhi indlu ihlanzisiswa kahle kakhulu ngemva kokuhlala kwazo
> > Nakanjani akukho ukubhema ngaphakathi noma noma kuphi endlini
> > Ayikho ikhebula noma i-satellite
> > Kuyatholakala: i-TV, i-DVD Player & ama-DVD, i-Chromecast
> > Amashidi/izinto zombhede/amasevisi asekhishini anikeziwe! Vele ulethe ukudla/izingubo
AMALUNGISELELO OKULALA: IKAMELO elilodwa:
Ikamelo lokulala elingu-1 phansi elinomnyango wokukhiya.
umbhede omkhulu wabantu abangu-1 noma abangu-2
Umuntu olala usana ongu-1 uyatholakala (awekho amalineni omntwana noma izingubo zokulala)
Izici ezingu-1 ZE-LOFT (akukho mnyango):
Umbhede owodwa ogcwele wabantu abangu-1 noma abangu-2
Imibhede emibili engu-3 yabantu abangu-3
onguhhafu we-High Speed Wireless Internet
Ikhishi linazo zonke izinto eziyinhloko ozozidinga ukuze upheke ukudla kwakho.
Cha Keurig, nje umshini ovamile wokwenza ikhofi.
I-grill ye-propane ene-propane inikezwa kudekhi engemuva
Amashidi ahlanzekile futhi ahlanzwe nge-sanitizer, izingubo zokulala nemicamelo kuhlinzekwa kuyo yonke imibhede ngaphandle kosana
Amathawula okugeza, izindwangu zokugeza, amathawula asekhishini, izindwangu zezitsha, neziponji kuyatholakala
Izinto eziyisisekelo zangasese ziyatholakala, (i-shampoo yemvelo/engenabugocigoci, i-conditioner, nezinsipho)
Azikho izindawo zokuhlanza izingubo zezivakashi esayithini
Isidlali se-TV ne-DVD esinokukhetha okuncane kwama-DVD. Wamukelekile futhi ukuletha i-Red Box yakho oyithandayo noma ama-DVD akho. Ayikho ikhebula noma i-satellite). Ungaphonsa kusuka kudivayisi yakho kuya ku-TV. Qiniseka ukuthi uxhuma ku-WiFi ukuze uyikhiphe kudivayisi yakho.
I-AC yezinsuku ezifudumele. I-thermostat isodongeni ezansi kwezitebhisi. Ukuze upholise indlu ngaphandle kokusebenzisa i-AC, vula iminyango namafasitela ngemva kokushona kwelanga, futhi uvale ngemva kokushona kwelanga. Le ndawo esodongeni nayo iyi-heater. Sicela ubuyele kude kumnikazi ngemva kokusetha njengoba isebenza njenge-thermostat.
Ukushisa komoya okuphoqelelwe ebusika noma ubusuku obupholile. I-thermostat isodongeni ekupheleni kwekhishi.
Iphedi yetende ngaphandle ikuvumela ukuba ujabulele okungcono kakhulu kwezindawo zombili: Ukukhempa nawo wonke amasevisi ekhaya! Ngakho qhubeka! Letha itende lakho.
Isimo sezulu sikuvumela ukuba ubeke umbhede womoya noma emibili kudekhi noma kuvulandi wangaphambili, kodwa sicela, hhayi egcekeni.
Umbhede omkhulu ongu-1, umbhede oyidabulu engu- 1, Imibhede elala umuntu oyedwa engu-3, imibhede yomoya engu- 2, 1 umbhede wosana
4.94 · 203 okushiwo abanye
Indawo enokuthula, omakhelwane abahle. Ukubukeka kwechibi usuka emphemeni nasegcekeni elingemuva kuyamangalisa! Sivame ukubona i-ellik, futhi izinkathi ezithile zonyaka ziletha amadada nama-herons aluhlaza okwesibhakabhaka, phakathi kwabanye. Ungase futhi ubone ama-woodpeckers, ama-squirrels, amarobhothi, ama-hawks, kanye ne-javelina ngezikhathi ezithile. Kuyakhokha ukugcina amehlo akho evulekile!
Glen is a college professor, and Marilyn is an online entrepreneur. We love hiking around the area and enjoying the wind through the tall pines. We're always on the lookout for new trails or little out-of-the-way lakes to float on.
Awukwazi ukuthola okuthile? Unemibuzo? Unganqikazi ukuthumela umlayezo nge-AirBnB, ungishayele ucingo noma ungithumelele umyalezo.
Ucingo # lwezingcingo noma imiyalezo luzonikezwa ngemva kokuphothulwa kokubhukha. Sicela ushiye umlayezo futhi ngizobuyela kuwe ngokushesha kangangokunokwenzeka.
Skrolela phansi esigabeni esithi "Indawo Yangakini" ukuze uthole izinto eziningi ongazibona futhi uzenze endaweni.
Ucingo # lwezingcingo noma imiyalezo…
UMarilyn Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Strawberry namaphethelo